WordPress vs Drupal: Waa kuwee Platform-ka ugu Wanaagsan Mareegtaada? | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/WordPress vs Drupal: Waa kuwee Platform-ka ugu Wanaagsan Mareegtaada?
WordPress vs Drupal: Waa kuwee Platform-ka ugu Wanaagsan Mareegtaada?
Waxaad samayn doontaa mid ka mid ah go'aamada ugu muhiimsan ee ku saabsan mareegahaaga ka hor inta aanad bilaabin dhisidda.
Doorashada goobta ugu fiican waa go'aan saameyn doona dhammaan dhinacyada mashruucaaga. Laga soo bilaabo naqshadeeda ilaa amniga ilaa qiimaha horumarinta, goob kasta oo caan ah waxay leedahay sifooyin u gaar ah taas oo saameyn doonta sida aad u wajahdo goobtaada.
Laba ka mid ah aaladaha ugu caansan (iyo aadka looga dooday) waa WordPress iyo Drupal. Tilmaan-bixiyahan WordPress vs Drupal, waxaanu si faahfaahsan u eegi doonaa faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka ikhtiyaar kasta. Kadib markaad akhrido maqaalkan waa inaad fikrad fiican ka haysaa midka ugu habboon mashruucaaga.
Hordhac WordPress ah
WordPress waa CMS-ka ugu caansan agagaarka iyadoo ku dhawaad ​​31% dhammaan mareegaha ay ku tiirsan yihiin. Intaa waxaa dheer, hal ka fiirsashada Google Trends ayaa ku tusinaysa sida loo jecel yahay marka la barbar dhigo kuwa la midka ah Drupal:
WordPress wuxuu ka kooban yahay bulsho weyn oo siisa taageero aan la qiyaasi karin oo ku saabsan noocyada badan ee shabakadaha aad dhisi karto. Runtii, waa suurtagal in la isticmaalo WordPress si loo abuuro wax kasta oo ka socda blog fudud ilaa mareegaha wararka ee weyn sida CNN.
WordPress waxaa loogu talagalay dhageystayaasha guud, taasoo la macno ah horumariye kasta oo shabakad ah inuu habeyn karo degelkooda WordPress.
Waa muhiim in la tilmaamo in WordPress, waxaan ula jeednaa wordpress.org halkii aan ka lahayn wordpress.com. Waxaan ku soo koobnay farqiga u dhexeeya labada maqaalkeena WordPress.com vs WordPress.org.
Aynu si kooban u eegno qaar ka mid ah faa'iidooyinka iyo khasaaraha isticmaalka WordPress:
Software-ku waa bilaash in la isticmaalo
Waxaad u habayn kartaa sida aad rabto adigoo isticmaalaya mawduucyadeeda iyo plugins
Aad bay u heli karaan kuwa bilowga ah
Waxaad ku dari kartaa sifooyin adag iyada oo aan la helin kood kakan PHP
Caannimadeeda waxay ka dhigan tahay inay leedahay bulsho badan oo taageerayaal ah
Waxa jira tiro astaamo ah oo “ka baxsan sanduuqa” oo aad kula ciyaari karto
Guud ahaan way ka jaban tahay in la horumariyo degel iyadoo la isticmaalayo WordPress marka loo eego meelaha kale
Waxay taariikh ahaan soo bandhigtay khatar amni oo ka weyn marka loo eego tartankeeda
Adiga ayaa mas'uul ka ah ammaankeeda iyo dayactirkeeda
In kasta oo ay leedahay hawlo badan, haddana aad kuma eka Drupal's - laakiin farqiga ayaa si weyn u xidhay
Isticmaalkeeda fudud waxay la macno tahay in badan oo ka mid ah mareegaha ay u muuqdaan kuwo la yaab leh oo la mid ah
Guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa doorashada CMS ee horumariyeyaasha, Drupal waxay sumcad u leedahay inay tahay doorashada ugu fiican haddii aad raadineyso inaad dhisto degel aad loo habeeyey.
Marka la barbardhigo WordPress, Drupal meelna uma dhowa sida caanka ah. In kasta oo ay jirtay muddo dheer (ilaa 2000) waxay mas'uul ka tahay in ka badan 2% (ama ku dhawaad ​​41 milyan) dhammaan mareegaha internetka.
Drupal, si kastaba ha ahaatee, waxaa ku tiirsan tiro ka mid ah mareegaha waaweyn oo ay ku jiraan The Economist iyo NASA.
Waxay ku siinaysaa awoodda ugu weyn ee lagu beddeli karo degelkaaga haddii aad u baahan tahay mid adag
Waxaa loo arkaa mid ammaan badan
Waxay leedahay astaamo badan oo awood leh oo ay ku jiraan goobo gaar ah iyo Muuqaallo - in kasta oo kuwan sidoo kale hadda laga faa'iidaysan karo WordPress
Dib u dhaca Drupal
Aad bay qaali u tahay in la dhiso degel gaar ah
Waxaa jira qalooc waxbarasho oo fog
Cusbooneysiinta mareegahaaga nooca ugu dambeeyay ee Drupal waxay noqon kartaa riyo xun
Ma laha khibrad abuurista nuxur isticmaale-saaxiibtinimo
Tilmaamaha ugu dabacsan ee Drupal sida garoonnada gaarka ah waxay u baahan yihiin maalgashi la taaban karo oo wakhtiga lagu fulinayo
Qiimaha loogu talagalay WordPress vs Drupal
Waxa hubaal ah in qodobka go'aaminaya marka ay timaaddo doorashada CMS-gaaga ay noqon doonto kharashka. Dabcan, qiimaha lagu soo dejisan karo software kasta waa muhiim. Laakiin haddii aad qorshaynayso in aad maamusho shabakad aad u adag markaa waxaad u baahan doontaa inaad tixgeliso kharashyada horumarinta ee la socda.
Waa bilaash in la rakibo oo la abuuro degel leh WordPress laakiin waxaa jira kharash lagu dhisayo degel WordPress oo aad u adag.
Iyadoo inta badan plugins ay yihiin lacag la'aan, waxaa jira tiro ka mid ah kuwa qaaliga ah oo aad u baahan doonto inaad bixiso si aad u hesho shabakad la dhisay. Si kastaba ha ahaatee, kuwani guud ahaan waxay ka shaqeeyaan inay noqdaan $100-$200 ugu badnaan plugins kuwaas oo in ka badan caddaynaya qiimahooda mustaqbalka fog. Intaa waxaa dheer, haddii aad doorato inaad shaqaaleysiiso horumariye waxaad u baahan doontaa inaad sidoo kale qiimeyso kharashkaas.
Qiimaha kale ee la tixgelinayo waa martigelinta degelkaaga. Dhammaan mareegaha WordPress waa kuwo iskood u maamula taas oo ugu yaraan ka dhigan tahay inaad dhab ahaantii leedahay. Warka kale ee wanaagsan ayaa ah in kuwa jecel Bluehost iyo WPEngine ay yihiin kuwo la awoodi karo. Haddii midkoodna kuu shaqeeyo waxaa jira tiro ka mid ah xulashooyinka martigelinta WordPress ee kale ee aad ka dooran karto.
Drupal sidoo kale waa qalab bilaash ah laakiin, mar labaad, qalab bilaash ah macnaheedu maaha horumarku waa bilaash. Ilaa aad tahay horumariye khibrad leh mooyaane waxaad hubaal ahaan u baahan doontaa inaad qof siiso lacag aad u badan si aad u abuurto degelkaaga marka loo eego kakanaanta Drupal.
Dabcan, waad dooran kartaa inaad dhisto degelkaaga Drupal laftaada, laakiin, inta aad lacag kaydsan karto, waxaad gelin doontaa waqti aad u badan - gaar ahaan haddii aqoontaada koodka gaarka ah ay maqan tahay.
Waxaa laga yaabaa in welwelka ugu weyn ee ku xeeran Drupal uu yahay kharashka cusboonaysiinta. Websaydhyada Drupal maaha kuwo hore u socon kara taas oo macnaheedu yahay inay u baahan yihiin dib-u-dhis dhammaystiran marka nooc cusub la soo saaro. Kuwani waa kharashyada sare ee horumariyayaal badan ay doortaan inay ku sii jiraan Drupal 7 halkii ay ka cusboonaysiin lahaayeen Drupal 8. Iyadoo laga yaabo inaad lacag kaydsato, waxaa lagaa tagayaa degel leh astaamo sii kordheysa oo duugoobay.
Si la mid ah WordPress, Drupal wuxuu bixiyaa dhowr ikhtiyaar oo martigelineed (oo ay ku jiraan Goobta & Cloudways) kaas oo daryeeli doona dhammaan shuruudahaaga qiimo jaban. Martigeliye kastaa wuxuu leeyahay faa'iidooyin kala duwan iyadoo ku xiran nooca mareegaha aad dhisayso sidaas darteed waxaa habboon in laga dukaameysto ka hor inta aadan mid gaar ah go'aansan.
Qiimaha marka la barbardhigo
Marka ay timaado dhisidda degel xirfad leh, WordPress ayaa si cad u ah ikhtiyaarka waxtarka badan leh. Haddi aad adigu samayso ama aad ku tiirsanaato horumariye, waxa aad galin doontaa wax aad uga yar dhaqaale ahaan iyo wakhti ahaanba.
Intaa waxaa dheer, marka ay timaado hagaajinta degelkaaga, WordPress wuxuu ka shaqeeyaa mid aad u jaban. Sida caadiga ah, dib-u-dhiska WordPress wuxuu ku kacayaa qiyaastii kala badh qaddarka sida Drupal.
Dabcan, mareegahaagu wuxuu u baahan yahay inuu si fiican u shaqeeyo laakiin taasi macnaheedu maaha inaad iska tuurto sida ay u muuqato. Iyadoo aan loo eegin nooca mareegaha aad abuurayso, waxaad u baahan doontaa mawduuc adag oo laga soo dhiso.
Tusaha Mawduuca WordPress wuxuu hayaa 3,700 ikhtiyaari oo bilaash ah oo ku siinaya noocyo badan oo kala duwan si aad u dhex gasho oo aad u hesho mid ku habboon mareegahaaga. Intaa waxaa dheer, mawduucyadani waxay u adeegaan noocyada kala duwan ee shabakadaha si aad u hubiso inaad hesho mid ku habboon waxa aad raadineyso.
Halka WordPress.org iyo horumariyayaal madax banaan ay bixiyaan dhowr mawduuc oo WordPress ah oo bilaash ah waxaad sidoo kale dooran kartaa mid qaali ah. Mawduucyada qiimaha leh ayaa ku habboon haddii aad raadineyso ikhtiyaar leh astaamo badan iyo fursado aad ku habeyn karto. Intaa waxaa dheer, waxay guud ahaan la imaan doonaan cusbooneysiin joogto ah iyo taageero ka sii wanaagsan.
Haddii aad go'aansato inaad mid ka mid ah maalgeliso waxaad ku tiirsanaan kartaa tiro ka mid ah goobaha suuqa ee mawduucyada sida ThemeForest oo leh rikoodh raadraac ah oo bixiya mawduucyo waaweyn oo lagu kalsoonaan karo dhammaan noocyada mareegaha. On ThemeForest oo keliya, waxaad ka dooran kartaa in ka badan 11,000 oo mawduucyo WordPress ah oo qaali ah.
Waxaad awood u yeelan doontaa inaad si fudud u habayso mawduucaaga adoo isticmaalaya Customizer-ka WordPress. Qalabka WordPress wuxuu kaa caawinayaa inaad isbeddelo muhiim ah ku sameyso boggaga boggaga.
Dhanka kale, Drupal wuxuu bixiyaa xulashooyin aad uga yar kan WordPress oo leh ku dhawaad ​​​​2,700 mawduucyo la heli karo. Ma aha oo kaliya inaad ka maqan tahay doorasho, laakiin qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa noqon doona kood gaar ah. Tani waxay la macno tahay inaad u baahan doonto horumariye kaa caawiya inaad website-kaaga ka dhigto mid soo jiidasho leh.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay horumariye khibrad leh markaa Drupal waa ikhtiyaar weyn maadaama aysan guud ahaan bixinin xulashooyin horay loo habeeyey. Sidaa darteed, waxaad xakameyn kartaa sida saxda ah ee website-kaagu u ekaan doono iyada oo aan mid ka mid ah naqshadaha horay loo doortay.
Mawduucyada marka la barbardhigo
Kala duwanaanshaheeda kala duwan iyo tirada xulashooyinka, WordPress wuxuu garaacaa Drupal gacma-hoos. Waxaa intaa dheer, awoodda aad isla markiiba u hirgelin karto naqshadaha "ka baxsan sanduuqa" oo si fudud u habayntooda ayaa ka dhigaysa safarkaaga bogga internetka oo dhammaystiran oo aad u fudud.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad u shaqeyneyso macmiil leh codsiyo naqshad gaar ah iyo shuruudo farsamo oo adag markaa Drupal waa ikhtiyaarka ugu fiican.
Tilmaamaha iyo Waxqabadka Marka la barbardhigo
Sida caadiga ah, Drupal wuxuu badiyaa ku guuleystay dagaalkan gaarka ah. Laakiin horumarradii ugu dambeeyay ee WordPress waxay la macno tahay inay bixiso astaamo badan oo mar Drupal ka dhigay mid cajiib ah.
Khuraafaad caadi ah oo ku jirta dooda u dhaxaysa WordPress iyo Drupal waa inaadan ku darin karin astaamo isku mid ah WordPress. Si kastaba ha noqotee, horumarinta plugins ee WordPress waxay la macno tahay inaad aad ugu dhowaan karto shaqeynta Drupal. Taas oo kaliya maaha ee waxaad isticmaali kartaa plugins-yada WordPress-ka ah si badbaado leh adigoo og inaadan u baahnayn inaad taabato PHP kasta.
Soo ifbaxa plugins sida Toolset iyo tiro ka mid ah bog dhisayaasha macnaheedu waa inaad hadda ku dari karto tiro astaamo la mid ah oo mar siisay Drupal faa'iidada aaggan. Waxaa intaa dheer, kordhinta xogta qaab dhismeedka xogta ay ku shaqeeyaan plugins-yadan waxay la macno tahay ka haajiridda Drupal una guurto WordPress way ka sahlan tahay sidaad u malaynayso.
Intaa waxaa dheer, WordPress wuxuu bixiyaa kumanaan plugins oo kale kuwaas oo u adeega noocyo kala duwan oo astaamo ah iyadoon loo eegin mareegaha aad dhisayso. Mid ka mid ah fiirinta kaydka WordPress wuxuu muujinayaa inta uu le'eg yahay buug-yaraha. Hab kale oo weyn oo lagu aqoonsan karo plugins-yada ugu fiican ee adiga kuu ah waa adiga oo dhex mara suuqyada suuqyada sida CodeCanyon.
Halkii laga isticmaali lahaa plugins, Drupal waxay isticmaashaa qaybo si ay u kordhiso sifooyinka goobtaada oo ay ugu kordhiso hawlqabad dheeraad ah. Iyada oo in ka badan 40,000 oo cutubyo ah oo laga dooran karo, Drupal taariikh ahaan waxay lahayd gacanta sare ee tartamayaasheeda marka loo eego awooddeeda inay kaa caawiso inaad abuurto mareegaha gaarka ah ee habboon.
Qaar badan oo ka mid ah sifooyinka baahida loo qabo laga bilaabo goobaha gaarka ah ilaa canshuuraha iyo gelitaanka ayaa la abuuray iyadoo la adeegsanayo Drupal iyo qaybaheeda. Haddii qaab dhismeedka nuxurka dabacsan yahay, la fidin karo waa waxa aad u baahan tahay markaa Drupal wuxuu ahaa CMS-ga ugu fiican ee loo jeedsado.
Si kastaba ha ahaatee, heerkaas kakanaanta waxaa hadhi doona qalooc waxbarasho oo adag si aad uga gudubto haddii aad rabto inaad sida ugu fiican uga faa'iidaysato.
Tilmaamaha iyo shaqeynta marka la barbardhigo
Iyadoo mar uu jiray guuleyste cad Drupal, WordPress wuxuu soo koobay farqiga oo xitaa wuxuu ka qabsaday indhaha qaar ka mid ah horumarinta.
Qaar badan oo ka mid ah sifooyinka uu Drupal ku sameeyay magaciisa ayaa hadda lagu daabaci karaa WordPress:
Noocyada boostada gaarka ah - Haddii mawduucaaga WordPress uusan horay ugu jirin noocyada boostada gaarka ah (tusaale ahaan, Total waxay horey u leedahay faylalka, shaqaalaha iyo marqaatiyada), ka dibna ku-darka sida Noocyada Qalabka ayaa ku siin kara habka "Drupal-like" abuurista qaybo degelkaaga WordPress
Goobaha gaarka ah - Labada ACF iyo Toolset-ka labaduba hadda waxay ku siinayaan awood aad ugu darto macluumaadka nooc kasta oo boosto ah sida Drupal
Taxonomies - Waxaad isticmaali kartaa Toolset si aad u nuqul ka sameyso Drupal's Vocabularies oo aad u abuurto qaybahaaga gaarka ah
Helitaanka - Qalabka wuxuu ku dhisi karaa 5 ka doorarka isticmaalaha WordPress ee aasaasiga ah si loo abuuro kuwa gaar ah sida Drupal
Xidhiidhada boostada - Ku xidh macluumaadkaaga la mid ah sida tixraaca Hay'addu ugu shaqeeyo Drupal
Ma aha oo kaliya inaad hadda ku abuuri karto dhammaan sifooyinkan WordPress, laakiin waa suurtagal iyada oo aan la helin koodka PHP ee adag, taas oo macnaheedu yahay inaad badbaadin doonto wakhti muhiim ah ku darista. Si la mid ah looma sheegi karo Drupal.
Tifaftiraha nuxurka cusub ee Gutenberg ee WordPress waa inuu ka dhigaa xitaa sahlan in lagu daro macluumaadka mareegahaaga iyadoo la adeegsanayo habka dhismihiisa. Si kastaba ha ahaatee, Drupal Gutenberg sidoo kale hadda waa la heli karaa ka dib markii ay abuurayaashu u gudbiyeen tifaftiraha CMS.
Haa waa lagu doodi karaa in Drupal uu wali yahay mid dabacsan oo uu bixiyaa astaamo aad u adag. Laakiin waxaa jira kiis la sameeyo in kaabayaasha adag ee Drupal ay bixiyaan xanuun aad uga badan faa'iidada. Ilaa aad diyaar u tahay inaad wakhti geliso barashada sida loo codeeyo astaamahan gaarka ah ama lacagta horumariyaha awooda, WordPress waa ikhtiyaarka ka jaban uguna fudud.
Waxqabadka iyo Amniga
Nabadgelyadu wali waa hal aag oo Drupal uu kaga faa'iidaysto WordPress. Iyadoo udub-dhexaadkeedu uu yahay mid sugan, dhibaatada WordPress waxay ku jirtaa qaar ka mid ah kordhinta dhinac saddexaad.
Runtii, marka loo eego sahan ay samaysay Wordfence, plugins ayaa lagu eedeeyay 55.9% dhammaan weerarrada internetka. Nasiib wanaag, codsashada caqli-galnimada waxay u adeegi doontaa walaacyada amniga ee ugu daran ee ku hareeraysan plugins. Xaddid tirada plugins ee aad rakibtay. Isticmaal kaliya plugins kuwaas oo si joogto ah loo cusboonaysiiyay. Dabcan in la cusbooneysiiyo waxay xoojin doontaa ammaanka mareegahaaga.
Dhanka kale, ammaankeeda ayaa weli ah mid ka mid ah goobaha iibka ee muhiimka ah ee Drupal. In kasta oo ay jireen tusaalayaal walaacyo amniga ah - weerarkii Drupalgeddon 2 ee dhowaan ayaa maskaxda ku soo dhacaya - Drupal wuxuu la kulmay tirada ugu yar ee weerarrada marka la barbar dhigo WordPress iyo Joomla tan iyo 2005.
WordPress waa ammaan laakiin marka la eego caannimadiisa waxay mar walba noqon doontaa mid aad ugu nugul weerarada marka loo eego Drupal. Labada bulsho si degdeg ah ayay uga jawaabaan wixii tabasho ah. Si kastaba ha ahaatee tirada badan ee plugins iyo mawduucyada ku jira WordPress waxay la macno tahay inaad u baahan tahay inaad ka taxadarto inaad iska ilaaliso soo dejinta wax kasta oo si liidata loo calaamadeeyay. Iyadoo aanad ku khaldami doonin labada doorasho, Drupal waxay u badan tahay inuu kaa ilaaliyo jebinta.
Taageerada WordPress vs Drupal
Markaad ku mashquulsan tahay waqtiyada kama dambaysta ah ee aad ku kicinayso mashruucaaga, taageerada macaamiisha ee la isku halayn karo waxay noqon kartaa mid muhiim ah si loo hubiyo in qorshayaashaada aysan dib u dhigin dhibaatooyin yaryar.
Caannimada WordPress ee adduunka oo dhan waxay la macno tahay inay jiraan wax soosaarayaal iyo naqshadeeyayaal badan oo diyaar u ah inay kaa caawiyaan wax kasta oo walaac ah.
Inkastoo nidaamka taageerada dhexe uusan jirin, waxaad awoodi doontaa inaad jawaabo u hesho su'aalahaaga murugada leh ee taageerada WordPress iyo sidoo kale dukumeenti waxtar leh. Intaa waxaa dheer, mawduucyada premium iyo plugins waxay yeelan doonaan kooxo taageero oo u gaar ah si ay kaaga caawiyaan arrimo kasta oo iyaga la xiriira.
Sida WordPress oo kale, Drupal sidoo kale waxay leedahay bulsho aad u firfircoon iyo sidoo kale qaybteeda taageerada halkaasoo khubaradu ay awood u yeelan doonaan inay kaaga hadlaan su'aalo kasta oo jira. Halkan, waxa kale oo aad ka heli doontaa dukumeenti, qolalka lagu sheekeysto iyo agabyo kale oo ku caawiya.
Goobta Suuqa Drupal waa kheyraad kale oo weyn halkaas oo aad kula xiriiri karto adeegyada xirfadleyda kuwaaso soo bandhigaya taariikhda arrimaha ay xalliyeen. Iyadoo laguu xaqiijin karo inaad heli doonto adeegga ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, waa inaad filaysaa inaad wax ka badan ku bixiso raaxadaas.
WordPress iyo Drupal marka la barbardhigo
Labada WordPress iyo Drupal waxay ku siinayaan taageero heerkeedu sareeyo oo loogu talagalay baahiyahaaga dhisme ee shabakadaada. Sida xaalku yahay labadaba, waa inaad xoogaa kharash ah ku bixisaa adeegga ugu fiican ee mid-ka-mid ah laakiin guud ahaan waa u qalantaa.
WordPress vs Drupal - Waa maxay Platform ay tahay inaad doorato?
In kasta oo labadooduba ay leeyihiin faa'iidooyin iyo khasaare, haddana way caddahay in faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee Drupal mar ku raaxaysan jiray ay xaddidnaayeen.
Drupal waa ikhtiyaar weyn haddii aad raadinayso inaad dhisto degel la habeeyey laakiin hadda waxaad ku samayn kartaa isla WordPress iyada oo aan lahayn koodh adag. Soo ifbaxa plugins sida Toolset iyo bogag dhisayaasha kala duwan waxay la macno tahay inaad hadda dhisi karto boggaga internetka "Drupal way" iyada oo aan wax walbahaarka ah oo la socda.
CMS kee baad door bidaysaa? La wadaag fikradahaaga WordPress vs Drupal fikradaha hoose…
Sannadka 2018 ee dib u eegista: WordPress at DreamHost
5 shay oo aad u baahan tahay inaad ka raadiso bixiye WordPress ah oo run ah oo la maareeyo